China DYSSQ series light single-shared Shredder ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ya | JWELL
DYSSQ usoro ìhè otu-shared Shredder
Iji bụrụ enyi na gburugburu ebe obibi ma dabara adaba maka imepụta ihe dị iche iche na ịpịpịa ihe, DYUN kwalitere ọkụ DYSSQ. Okwesiri maka ikpochapu na imegharị nke ọnụ ụzọ ámá, nnukwu osisi plastik, ụlọ nrụpụta, ihe nkiri plastik na ihe dị iche iche na-akpụzi na -emepụta n'oge ịkpụzi ọgwụ, ịkpụzi ịkpụ na extrusion. Dabere na ụzọ nri dị iche iche na imegharị nke saịtị ahụ, ndị na-ebugharị na ndị na-ekpochapụ ihe nwere ike ịkwadebe. Nke a shredder nwere obere ọsọ rotary cutter, ma ọ bụ nke obere mkpọtụ, elu mmepụta na ndị ọzọ ume ịzọpụta.
A na-ejikarị igwe eji akpụgharị mma (mkpịsị aka + agụba) eme ihe, otu mma, igbe na-ebu, ihe nkwado igbe, usoro nri, usoro ịmị ọkụ, usoro ike, na sistemu eletriki. Kwee ka obere ihe ọkụ na obere igwe dị larịị na ihe eji arụ ọrụ n'oge ọrụ. Enwere ike gbanwee nha nke ihe ahụ dabere na oghere ihuenyo.
Nhazi ụdị ihe ọ bụla dị iche iche nke igwe, ihe nkedo ọgwụ, na ihe nkedo extrusion, gụnyere PP, PE, PET, PC, ABS, naịlọn, wdg.
Mgbe ihe ahụ na-abanye n'ime ụlọ ahụ na-ekpo ọkụ site na ihe mkpuchi ahụ, igbe a na-ebugharị na-ebugharị site na ọdụ ụgbọ mmiri iji mee ka ihe ahụ gaa na mma mma. A na-eji igwe, belt, pulley na reducer eme ihe na-agba mma mma, a na-agbanyekwa ihe ahụ. A na-eji bolts edozi mma a na-akwagharị. N'elu oche a na-ebugharị nke mma mma, mgbe akụrụngwa na-agba ọsọ, ihe ga-eme ka ihe ahụ mebie site na mmekọrịta dị n'etiti mma ibugharị na mma edozi. Enwere ike idozi ọdịiche dị n'etiti mma na-ebugharị na mma ahụ. A na-ewepụta ihe ndị ahụ site na otu-shred shredder ahụ site na ihuenyo ahụ, na oghere nke ihe ndị ewepụtara na-ekpebisi ike site na oghere nke ihuenyo ahụ.
Ndinuak Chamber Size Max
Nke gara aga: JWZ-BM30,50,100,160 Fụọnụ Nkedo Machine
Osote: Usoro Dyss obere otu-shredder
Usoro Dyss obere otu-shredder
Vkwanyere Multi Layer Okpomọkụ mkpuchi Corrugated Board, N'èzí Ngwa, Pee Pp Osisi-Plastic Ft Extrusion, Vkwanyere Corrugated Board, Pc Mpempe akwụkwọ, Pc oghere mpempe akwụkwọ,